Dhaqatiirta ka howlgalo countiga Nairobi ee shaqa joojinta ku guda jiro oo aan bishan Mushaar la siin doonin – The Voice of Northeastern Kenya
Dhaqatiirta ka howlgalo countiga Nairobi ee shaqa joojinta ku guda jiro oo aan bishan Mushaar la siin doonin
Star FM December 28, 2016
Gavanaha maamul goboleedka Nairobi Dr.Evans Kidero ayaa sheegay in dhaqatiir ay tiradoodu kor u dhafeyso 120 oo ka howlgalo countiga uu hogaamiyo anan la siin doonin mushaarka bishan Disembar sanada 2016-ka maadama ay shaqa joojin lagu tilmaamay sharci daro ku guda jireen.
124 dhaqatiir oo ka shaqeeyo cisbitaalada kala duwan ee maamul goboleedka Nairobi ayaa ka mid noqday howlwadeenada shaqa joojinta ku dhaqaqay 5-tii bishan Disembar iyaga oo dalbanaya mushar kordhin ay sheegen in laisku afgartay sanadii 2013-kii xiligaas oo la saxiixay heshiis la magacbaxay CBA.
Hadii heshiiskan la dhaqangeliyo dhaqtarka ugu mushaar yar ayaa qadanaya 342,000 oo shilin halka midka ugu sareyana uu qaadanayo mushaar gaaraya 940,000 oo shilinka dalka.
Gavanaha ayaa dhanka kale xusay in bixinta adeegyada caafimadka ay boqolkiba 80 jireen maadama kalkaaliyaasha ay shaqadoodu dib ugu laabten.
Xoghayaha dowlada maamul goboleedka Nairobi Robert Ayisi ayaa ka dhawajiyay in aynan jirin wax sabab ah oo keentay in dhaqatirtan ay shaqa joojin ku dhaqaqaan maadama sida uu hadalka u dhigay heshiiska CBA oo ay hada dalbanayaan in la dhaqangeliyo uusan ka mid ahayn waxyaabihii ay ka cabanayeen bishii Oktobar ee sanadkan.
Dr Ayisi, ayaa carabka ku dhuftay in go’aankan dhaqatiirta shaqada looga tirayo uu yimid kadib markii gavanarada dalka ay ku heshiiyeen in tallabo laga qaadao.
Wararka ayaa intaas ku daraya in 45 maamul goboleed marka laga reebo countiyada Bomet iyo Kwale ay shaaca ka qaaden in xilalkan ay banaanyihiin sidaas awgeedna dhaqatiirta shaqa raadiska ah ay codsi soo dirsan karaan.
Dhaqatiirta doonaya in ay xilalkan buuxiyaan aya heysto tani iyo 14-ka bisha 1-ad ee sanadka soo socdo oo ay codsiyadooda ku gudbin karaan.
← Dowlada Nigeria oo liiska musharaadka ka saartay magacyada 50,000 oo ahaa shaqaala been abuur ah
Aqalka Senetka oo maanta yeelanayo fadhi ku saabsan isbedelada la xirrira shuruucda doorashooyinka oo dhawaan la ansaxiyay →